Iyo iPhone 8 inogona kunge isina Gigabit yekumhanyisa modem | IPhone nhau
Hondo neQualcomm inogona kuve neyekutanga mhedzisiro: iyo iPhone 8 yaisagona kuve neGigabit yekumhanyisa modem. Zvirinani izvi ndizvo zvinotaurwa neBloomberg. Zvinotaridza kuti mhedzisiro yegakava iri pakati pemugadziri neApple ingadai yakagadzira iyo kambani haidi kuvimba neQualcomm chete yemodem yeiyo inotevera smartphone, uye ingadai yakafunga kushandisa zvakare Intel.
Ipo Qualcomm ichiita kunge ine Gigabit yekumhanya inoenderana modem yakagadzirira, Intel haingasvike munguva yekumisikidzwa kweinotevera iPhone, uye Apple haidi kuti Internet yekubatanidza kumhanya kweiyo iPhone 8 ive yakasiyana mune vamwe vashandisi nevamwe, saka Ini ndaizogonesa iyo Qualcomm modem kuitira kuti ivo vese vaine imwechete yekubatana kumhanya. Izvi zvinorevei kumushandisi wekupedzisira? Hapana kana chinhu.
Pachine hapana anoshanda maGigabit network, kunyange makambani senge AT&T akataura kuti muUnited StatesGore risati rapera, ivo vachatanga kuendesa enetiweki yekutanga inoenderana neiyi nyowani kumhanya.Kana mune dzimwe nzvimbo dzepasi 4G kufukidzwa kuchangosvika, uye mune vamwe vachiri kugara ipapo vakamirira iyo, kutaura nezve iyi nyowani tekinoroji zvinoita kunge senge kuseka kwevazhinji vashandisi. Zviripachena, zvinogara zvirinani kuve neakanakisa kufukidzwa uye nekumhanyisa kwepamusoro kunowanikwa, asi neazvino madhata ehurongwa ayo makambani anotipa, kuve nekumhanya kwe1Gbps kunongoshanda chete kuti ugone kupedzisa kunyorera kwako data mune 2 kana 3 chete. masekondi, hapana chimwezve.
Ndeipi yekumhanyisa kumhanyisa iyo yako oparesheni inokupa izvozvi? Zvinosiyana zvakanyanya zvichienderana nekambani, nzvimbo yauri uye kuzadzikiswa kuripo panguva iyoyo, asi mikana inopihwa neazvino 4G network (mune dzidziso) inopfuura zvakakwana kunyangwe kunakidzwa ne4K zvemukati mune yako nhare, kana iwe iva nehushingi hwekuyedza, hongu (gadzirira imwe voucha yedata kuti ukwanise kupedzisa mwedzi). Kunyangwe paunenge uchiona kukanganisa kwemushandisi anotenga yavo iPhone 8 ichave zero, inogara iri nhau inogona kupa misoro yakanaka uye zadzisa imwe yemazamu enhau dzazvino: "Usarega chokwadi chichikukanganisa nemusoro wakanaka" sekuona kwedu ichi chinyorwa che Nyika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone X » Iyo iPhone 8 inogona kunge isina Gigabit yekumhanyisa modem
Inokwana kumhanya, asi izvi zvinoita Apple kambani yechipiri, iyo la blackberry
Nhau dzakaipa kwazvo nekuti kwatova nevakagadziri vakati wandei vari kusanganisira 1 Gbit kumhanyisa modem uye icho chichava chiziviso chakaipisisa cheapuro icho nekufamba mumatare akapusa chingarasa chinhu chinonakidza